Multivarka घर ryazhenka। कसरी multivarka मा एक किण्वित सुखा दूध तयार गर्न "रेडमन्ड"
यस लेखमा हामी तपाईंलाई बताउन कसरी multivarka मा अमिल्याएर पाकेका दूध बनाउन हुनेछ। हामी थाह छ, विभिन्न कम्पनीहरु को भान्सा मिसिन फरक मोड छ, त्यसैले यो एक सार्वभौमिक नुस्खा दिन गाह्रो छ। हामी पनि अमिलो दूध तयारी प्राचीन विधि वर्णन। यो किण्वित दूध उत्पादन नाजुक मखमली स्वाद तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ। उहाँले हामी सामान्यतया "Kefir" लेबल संग बैग वा जार मा किन्न जो गांठ, संग अम्लीय तरल मन छैन। यो तपाईं आफैलाई उत्पादन को बोसो सामग्री समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै भन्दा राम्रो घटक प्रयोग गरेर मात्र पक्का हुन हामी व्यक्तिगत पेय तयार गर्दा खातामा पनि लिएको हुनुपर्छ।
Kefir Byzantine र स्लाव भाषाहरु संस्कृतिका जंक्शन मा उत्पत्ति। मसीही Tsargrad को उचाइमा साथ "ग्रीक दूध" को रूपमा कीव रूस र यस्तो mundane, तर उपयोगी उत्पादन, penetrated। यो फोम तहहरू धेरै थियो। यो कसरी गर्न बाहिर आंकडा गर्न सजिलो छ: एक फिलिम गठन सम्म प्रतीक्षा, दूध सतह मा एक भुत्ते वस्तु नयाँ उपस्थिति लागि कोठा बनाउन यसको तल कम। युक्रेनमा, यस्तो व्यवहार (एक चम्चा संग खाएको छ जो) perekladentsem भनिन्छ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो जवाफ रोमियो निस्कने राखे। दूध मा हालिएको थियो माटो बर्तन र तातो ओवन मा धेरै घन्टा fretted। त्यसपछि खट्टा क्रीम थप्न र गर्मी मा फिर्ता राखे। यो पेय बस ईश्वरीय प्राप्त छ: एक चिल्लो बनावट, मलाईदार स्वाद र pinkish रंग संग। तर शताब्दीयौंदेखि पारित गरेको छ, र अहिले ryazhenka multivarka तयार हुन सक्छ।
आधुनिक अवस्थामा उत्पादन कठिनाइ
म सामान्य तपाईं खट्टे दूध निर्माण को विधि बारे अंदाजा हुन सक्छ लाग्छ। दूध पहिले गरम ओवन एक लामो languishing बनाउन कारण पग्लियो छ। यो एक बेज-गुलाबी एक नाजुक मलाईदार स्वाद संग, हुँदा, न्यानो दूध skvasilos गर्न लैक्टिक एसिड जीवाणुहरु को एक बस्ती सुरु गर्न। सबै बुद्धि छ। मात्र प्रश्न कसरी अभ्यास मा यस सरल सिद्धान्त अनुवाद छ। आखिर, सबै घरहरू परम्परागत युक्रेनी भट्टीमा संरक्षित छन्। र खाद्य उद्योग, जहाँ सबै चाँडै सामान उत्पादन मा र ठूलो परिमाणमा उद्देश्य छ पाकेका दूध किण्वित र सबै thermophilic जीवाणुहरु मा किण्वित मा। नै एक स्वादिष्ट पेय कसरी बनाउन सक्छ? यहाँ हामी घर उपकरण को समर्थन छ। multivarka "रेडमन्ड" मा Ryazhenka, "पानासोनिक", "MOULINEX" वा "फिलिप्स" - यो एक कल्पना छ।
दूध कस्तो छनौट गर्न
यो कुरा मा, हामी पुरानो परम्परा प्रतिबद्ध रहने र क्षेत्रहरु बाकस, जहाँ यो छ महिनाको लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ सबै उत्पादनहरु बेवास्ता गर्नु पर्छ। हामी पनि अस्वीकार गर्नु पर्छ , तर झिकिएको दुध त्यहाँ ghee रूपान्तरणको लागि पर्याप्त बोसो छैन किनभने। जग लागि खट्टे दूध लागि बजार जाने गर्नुपर्छ।
दूध, हामी युक्रेनमा किन्न जो "nezbyrane" भनिन्छ। यो यो अलग प्रक्रिया पारित भएको छैन भन्ने हो। पछि तेल वा क्रीम को तयारी को लागि प्रयोग गरियो, जो क्रीम, - सामान्यतया किसानहरु दुई घण्टा, र त्यसपछि हटाइएको भन्दा माथि खडा बिदा उपज। र भनिन्छ "दूध" को विभाजक तल बायाँ के बेच्न। त्यसैले एक स्वादिष्ट किण्वित पाकेका multivarka मा, हामी एक ताजा उपज आवश्यक आएको।
पाकेका दूध तयारी
काल्पनिक जनसंख्या साँच्चै inexhaustible छ। केही कारीगरों "काता" एक पारंपरिक ओवन मा दूध, र एक थर्मस मा गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्। हामी यो के चाहिन्छ? राम्रो हुनेछ भन्ने व्यञ्जन न्यानो राख्न। तपाईं ठूलो-हजुरआमा दुर्दम्य माटो पट को एक पैतृक बाँकी छ? युक्रेनमा यस्तो सुराही बेच्न राष्ट्रिय पकवान लागि - chanakhi, तर सुखा दूध र अमिलो दूध उत्पादन लागि तिनीहरू पनि amiss। त्यसैले, एक सामान्य हत्येदार बरतन मा दूध जोश, एक पट यसलाई खन्याउन र दुई घण्टा preheated तर चालित-बन्द ओवन मा राखे। तपाईं एक थर्मस मा उम्लिरहेको तरल खन्याउन सक्नुहुन्छ, तर प्रभाव नै छैन। तर मा ryazhenka multivarka को एजेन्डा मा हामी छ भने, किन त्यहाँ खाना पकाउन छैन र पाकेका दूध? साँझ सुन्दर उत्पादनमा एक कचौरा मा पोख्नुहोस्, ढक्कन बन्द गर्नुहोस्। छ घण्टा - मेनु "quenching" मोड, र घडी पर्दाफास। र भोइला Query: बिहान तपाईं एक पग्लियो जेली पाउनुहुनेछ।
multivarka मा Ryazhenka "रेडमन्ड"
यो मिसिन को तयारी को लागि आदर्श छ , किण्वित दूध पिउन त्यहाँ ठूलो कार्यक्रम, "Multipovar" यो छ रूपमा। न्यानो दूध र बोसो खट्टा क्रीम को 250 ग्राम को एक लीटर साथै, हामी एक ढक्कन र सिलिकन चटाई (कपडा वा नरम तन्तु) संग एक जार आवश्यक छ। अझै पनि पिटाई र एक कचौरा सामाग्री तयार गर्न मिश्रण लागि whisk सशस्त्र।
यसैले, तर फैलियो। Whisk बुलबुले गर्न काम जानुहोस्। हामी को पातलो स्ट्रिम खन्याउन सुखा दूध। हामी एकरूपता हासिल गर्न केही समय धेरै हरायो। को जार भन्दा तरल पोख्नुहोस्, गर्न भित्र condensate penetrated छैन आफ्नो Lids कवर। को कचौरा Multivarki चटाई वा कपडा तल गलैँचा। को जार राख्नु, मेशिन को ढक्कन बन्द गर्नुहोस्। 40 डिग्री - - र समय - दस मेनुमा, कार्यक्रम "multipovar" वांछित तापमान चयन गर्नुहोस्। सबै हामी आफ्नो घर ryazhenka मा multivarka तयार भन्न सकिन्छ। यो जार हटाउन र तिनीहरूलाई फ्रिज राख्न मात्र रहनेछ।
तपाईं कार बाहिर झिकेर उत्पादन, पानी जस्तो हुनेछ यदि छक्क छैन। चिसो अवस्थामा यो आवश्यक thickens। खैर, तपाईं आंकडा ख्याल भने, तपाईं खट्टा क्रीम र दही न्यानो दूध किण्वन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पेय को स्वाद अझ कोमल छ, तर विशिष्ट अम्लता बिना।
multivarka मा Ryazhenka "पानासोनिक"
यो मिसिन अलि फरक मेनु, त्यसैले यसलाई अर्थमा छुट्टै दिन बनाउँछ लागि नुस्खा एक पेय। किनभने यो तपाईं एक कचौरा मा किण्वित पाकेका दूध तयार गर्न अनुमति दिन्छ भान्सा मिसिन "पानासोनिक" राम्रो छ। त्यसैले, साधारण चिसो दूध एक लीटर खन्याउन ढक्कन बन्द र छ घण्टा मोड "stewing" Multivarki सेट। मानव शरीर तापमान - त्यसपछि 36 डिग्री तरल लागि शांत। यो मोड - को विकास को लागि आदर्श लैक्टिक एसिड जीवाणुहरु। ग्लास सानो दूध मा ढाला, तीन फैटी चम्मच (छैन 20% भन्दा कम) क्रीम को संग मिश्रण। एक कचौरा Multivarki यो खमिर गर्न तरल फिर्ता, राम्ररी एक काठ स्पाटुला हलचल। ढक्कन बन्द र पावर बटन थिच्नुहोस्। यो ताप मोड। 25 मिनेट पछि, मिसिन बन्द, तर आवरण उठ्नेछ छैन। यो ryazhenka मा छ बजे तयार multivarka सम्म थिएन। हामी thickening लागि फ्रिज मा बदलाव।
फर्सी रस: ताजा ककटेल नुस्खा र समर्थित पेय
Casco खरीद मा सुरक्षित
कसरी कोठा आरामदायक बनाउन। आरामदायक सानो कोठा कसरी बनाउने। हामी बच्चा गरेको कोठा आरामदायक बनाउन
बच्चाहरु 4-5 वर्ष को लागि बच्चाहरु पहेली। बच्चाहरु 4-5 वर्ष को लागि पहेली
को प्रिपेरेटरी समूहमा Didactic खेल। बाल सदन मा कक्षाहरू
स्वादिष्ट विचार: एक पिकनिक लागि स्यान्डविच
मुख्य रूप व्यापार मा सफलता - कस्तो सपना मिसिन